Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Miisa ambany ho an'ny NASA SpaceX Crew-3 Lift Off
Ny sidina Crew-3 dia hitondra ireo astronauts NASA Raja Chari, komandin'ny misiona; Tom Marshburn, mpanamory fiaramanidina; ary Kayla Barron, manampahaizana manokana amin'ny misiona; ary koa ny mpanamory sambondanitra ESA (European Space Agency) Matthias Maurer, izay ho manampahaizana manokana amin'ny iraka, mankany amin'ny gara eny ivelany ho an'ny iraka siansa enim-bolana.
Ny NASA dia hanome fitantarana momba ny hetsika mialoha ny fandefasana sy fandefasana ho an'ny iraka SpaceX Crew-3 an'ny masoivoho miaraka amin'ireo mpanamory sambon-danitra mankany amin'ny International Space Station. Ity no iraka fihodinana fahatelo miaraka amin'ireo mpanamory sambon-danitra ao amin'ny SpaceX Crew Dragon ary ny sidina fahefatra miaraka amin'ny mpanamory sambon-danitra, anisan'izany ny sidina fitsapana Demo-2, ao anatin'ny Programa Commercial Crew an'ny masoivoho.
Ny fandefasana dia lasibatra amin'ny 2:21 maraina EDT Alahady 31 Oktobra, amin'ny balafomanga SpaceX Falcon 9 avy amin'ny Launch Complex 39A ao amin'ny Kennedy Space Center any Florida any NASA. Ny Crew Dragon Endurance dia kasaina handeha amin'ny fiantsonan'ny habakabaka amin'ny alatsinainy 12:10 alatsinainy 1 nov.
Nandany ny fe-potoana farany ho an'ny fankatoavana haino aman-jery ho an'ny fandrakofana manokana an'io fanombohana io. Misy fampahalalana bebe kokoa momba ny fankatoavana haino aman-jery amin'ny alàlan'ny mailaka: [email voaaro]
Ny fandraisan'anjaran'ny haino aman-jery rehetra amin'ireto valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety manaraka ireto dia ho lavitra afa-tsy izay voatanisa manokana etsy ambany, ary haino aman-jery voafetra ihany no hipetraka ao Kennedy noho ny areti-mifindra coronavirus (COVID-19). Mariho fa hijanona ho mikatona mandritra ireo hetsika ireo ny tranoben'ny Kennedy Press Site ho fiarovana ny mpiasa sy ny mpanao gazety Kennedy, afa-tsy amin'ny haino aman-jery voafetra izay hahazo fanamafisana an-tsoratra amin'ny andro ho avy.
Alatsinainy, Ôkt 25
7 hariva (eo ho eo) - Fampahalalana momba ny fahaizan'ny sidina (FRR) Media Teleconferensi ao Kennedy (tsy adiny iray akory aorian'ny nahavitan'ny FRR) niaraka tamin'ireto mpandray anjara manaraka ireto:
• Kathryn Lueders, mpandrindra mpiara-miasa, Direction Mission Mission Space, foiben'ny NASA
• Steve Stich, mpitantana, NASA Program Crew Program, Kennedy
• Joel Montalbano, mpitantana, International Space Station, Johnson Space Center NASA
• Holly Ridings, talen'ny sidina amin'ny sidina, Direction de la Opérations de Flight, Johnson
• William Gerstenmaier, filoha lefitra, Build and Flight Reliability, SpaceX
• Frank de Winne, mpitantana ny programa, International Space Station, ESA
• Junichi Sakai, mpitantana, International Space Station, JAXA
Mety hametraka fanontaniana amin'ny alàlan'ny telefaona fotsiny ny media. Ho an'ny nomeraon-telefaona sy ny kaody passcode, azafady mifandraisa amin'ny efitrano gazety Kennedy tsy latsaky ny 4 hariva Alatsinainy 25 Oktobra, amin'ny: [email voaaro]
Talata, Ôkt 26
1:30 tolakandro (eo ho eo) - Hetsika Fampahalalam-baovao fahatongavan'ny ekipa ao Kennedy miaraka amin'ireto mpandray anjara manaraka ireto (fampahalalam-baovao manokana ihany no voamarina teo aloha):
• Bob Cabana, mpitantana mpiara-miasa amin'ny NASA
• Janet Petro, talen'ny Kennedy Space Center an'ny NASA
• Ilay astronaut NASA Raja Chari
• Tom Marshburn, mpanamory sambon-danitra NASA
• Kayla Barron, mpanamory sambondanitra NASA
• Matsias Maurer, mpanamory sambon-danitra ESA
Tsy misy safidy amin'ny teleconference ho an'ity hetsika ity.
Alarobia, Ôkt 27
7:45 maraina - Fandraisana anjara amin'ny haino aman-jery Virtual Crew ao Kennedy miaraka amin'ireo mpanamory sambondanitra Crew-3:
Alakamisy, Ôkt 28
1 ora tolak'andro: Science Media Teleconference hifanakalo hevitra momba ny fanadihadiana hotohanan'ny ekipa Crew-3 mandritra ny iraka ataon'izy ireo miaraka amin'ireto mpandray anjara manaraka ireto:
• David Brady, mpahay siansa amin'ny programa ho an'ny International Space Station Program ao Johnson, dia hanome fampidirana ny fikarohana sy ny haitao ambony sambo fiaramanidina Crew Dragon.
• Dr. Yun-Xing Wang, mpanadihady zokiolona ao amin'ny laboratoara Structural Biophysics ao amin'ny National Cancer Institute, sy ny Dr. Jason R. Stagno, mpiasan'ny mpahay siansa ao amin'ny Structural Biophysics Laboratory ao amin'ny National Cancer Institute. Wang sy Stagno dia hiresaka momba ny fanandramana Uniform Protein Crystal Growth izay mikendry ny hitombo eo akaikin'ny microcrystals tonga lafatra amin'ny microgravity, izay hodinihin'ny mpaka sary atomika mahery vaika amin'ny fiverenany eto an-tany miaraka amin'ireo mpanamory sambon-danitra Crew-2.
• Dr. Grace Douglas, mpahay siansa mpitarika ny ezaka fikarohana ataon'ny NASA Advanced Technology Technology izay hiresaka momba ilay fanandramana momba ny Physiology momba ny sakafo. Ity fanadihadiana ity dia mandinika ny fiantraikan'ny fisakafoanana amin'ny alàlan'ny fivelaran'ny habakabaka amin'ny fahasalamana amin'ny astronaut.
• Dr. Hector Guiterrez, profesora momba ny injeniera mekanika sy aerospace ao amin'ny Institute of Technology Florida, izay hiresaka momba ny Smartphone Video Guidance Sensor (SVGS) izay hitsapana andian-tariby LED izay hiarahan'ny robot manidina malalaka Astrobee mandritra ny fananganana. fihetsehana fiaramanidina.
• Solontena avy amin'ny fanadihadiana Standard Measures, izay manangona andiana fandrefesana fototra mifandraika amin'ny loza ateraky ny sidina eny amin'ny habakabaka ataon'olombelona avy amin'ny mpanamory sambon-danitra mialoha, mandritra ary aorian'ny iraka maharitra.
Zoma, Act. 29
12 hariva - Fanazavana fampahalalam-baovao NASA ao amin'ny TV NASA miaraka amin'ireo mpandray anjara manaraka:
• Bill Nelson, mpitantana ny NASA
• Pam Melroy, mpitantana lefitra NASA
• Woody Hoburg, mpanamory sambon-danitra NASA
10 hariva - Fihaonambe Prelaunch News ao Kennedy (tsy adiny iray akory aorian'ny nahavitana ny Launch Readiness Review) miaraka amin'ireo mpandray anjara manaraka:
• Steve Stich, mpitantana, Programan'ny Crew Commercial, Kennedy
• Joel Montalbano, mpitantana, International Space Station, Johnson
• Jennifer Buchli, lefitry ny mpahay siansa lefitra, International Space Station Program, Johnson
• Sarah Walker, talen'ny Dragon Mission Management, SpaceX
• Josef Aschbacher, tale jeneraly, ESA
• William Ulrich, mpiandraikitra ny toetr'andro, 45th Weather Squadron, United States Space Force
Asabotsy 30 Oktobra
10 alina - Manomboka ny fandrakofana ny fandefasana ny fahitalavitra NASA. Ny Televiziona NASA dia hanana fandrakofana mitohy, ao anatin'izany ny fandefasana, ny docking, ny varavarana misokatra ary ny lanonana fandraisana.
Alahady 31 Oktobra
2:21 maraina - Fanombohana
Alatsinainy, Nôv. 1
12:10 maraina - Docking
1:50 maraina - Fisokafan'ny foy
2:20 maraina – Fifampiarahabana
Hanomboka amin'ny 10 ora alina ny sabotsy 30 oktobra amin'ny XNUMX ora alina ny fandrakofana mivantana ny NASA TV. Ho an'ny fampahalalana momba ny rohy ambany amin'ny NASA TV, ny fandaharam-potoana ary ny rohy mankany amin'ny horonan-tsary mivantana.
Ho hita ao amin'ny tranonkalan'ilay masoivoho ny fandrakofana ny andrana ny asa fitoriana SpaceX Crew-3 NASA. Ny fandrakofana dia ahitana fampitana mivantana sy fanavaozana bilaogy manomboka tsy mialoha ny 10 ora ET ny asabotsy 30 oktobra, rehefa misy ny tsangambato farany. Horonantsary mivantana sy sarimihetsika fandefasana dia ho hita vetivety aorian'ny fiakarana.
Manatreha ny fandefasana virtoaly
Ny NASA dia hanome fahana horonan-tsary mivantana an'ny Launch Complex 39A tokony ho 48 ora alohan'ny handrafetana ny iraka Crew-3. Miandry ny olana ara-teknika tsy azo inoana, tsy ho tapaka ny fahana mandra-panombohan'ny fandaharana mialoha amin'ny fahitalavitra NASA, adiny efatra eo ho eo alohan'ny hanombohana.